Saturday, November 17th, 2018 - 15:37:17
Klopp oo horumarinta Origi guntiga u xirtay
0 Thursday April 14, 2016 - 09:59:00
Laacibka da'da yare e Divock Origi ayaa bandhig heer sare ah muujiyay, keddib tababarka adag ee xerada Melwood, Tababare Klopp ayaa lagu sheegay ninka dhabarka ka riixaya Horumarka ifaya ee Laacibku sameynayo, laacibkan weerarka ah ayaa u dhaliyay Liverpool labadii kulan ee u dambeysay 3 gool.
Yaa u soo bixi doona Semi finalka koobka Uefa ogoow kulamada caawa iyo Saacadda
0 Thursday April 14, 2016 - 02:19:31
(Kubadbile)- kulamo katirsan wareega siddeeda koobka uefa Europa League lugtiisa labaaad ayaa caawa ka dhici doona qaaradda.
Klopp oo Ammaan dusha ka saaray Allen
0 Monday April 11, 2016 - 10:05:09
Liverpool tababaraheeda Jurgen Klopp ayaa waxaa uu Ammaan dusha ka saaray Joe Allen oo uu sheegayna in Europa League quarter-final kulanka ah uu ka hor tegi doono Borussia Dortmund.
Yaad ka taqaan Safkii ugu Fiicnaa Europa League
0 Saturday April 09, 2016 - 10:56:31
Safkii Toddobaadka ee Europa League kooxdii ugu fiicneyd waa la soo saaray, dhaliyeyaasha Aritz Aduriz iyo Cédric Bakambu ayaa safdka gaaban kasoo muuqday.
Aqriso Natiijooyinka kulamada Uefa Ueropa League
0 Friday April 08, 2016 - 01:35:34
(Kubadbile)- Waxaa la ciyaaray kulamadi koowaad ee wareega siddeeda koobka Uefa Uerpoa League.
Falanqeynta Dortmund vs Liverpool, Klopp oo ka hortegaya Kooxdiisii hore
0 Thursday April 07, 2016 - 10:19:50
Kulanka ayaa ka mid ah kuwa xiisaha badan ee laga ciyaarayo Europa league, marka uu Jürgen Klopp isagoo wata Liverpool ka hor tago kooxdiisii hore.
Liverpool oo 60-sano Rikoor u yiil Man Utd ka jebisay, Muxuu yahay?
0 Saturday March 19, 2016 - 09:48:16
Liverpool ayaa Taariikh Kooxeed oo heer Qaran ah u dhigtay Man Utd, kulankii Europa League ee labada Kooxood, waxayna noqotay kooxdii u horreysay ee reer England ah ee Manchester ka cirib tirta Koob Yurub ah muddo.
Ogoow kooxaha usoo baxay wareega Siddeeda koobka Uefa iyo Taariikhdooda
0 Friday March 18, 2016 - 10:33:59
(Kubadbile)-Kooxaha daka Spain ayaahogaamiaya siddeeda koox ee usoo gudubay rubuc dhammaadka kooba Uefa Europa league waxana usoo gudbtay 3 koox.
Liverpool oo quusisay Man United ogoow natiijooyinka Uerpoa League ee Xalay
0 Friday March 18, 2016 - 08:57:36
(Kubadbile)- Kooxda Liverpool ayaa usoo gudubtay wareega sideeda koobkaUefa Ueropa League kadib marki ay barbaro 1-1 la gashay kooxda kooxda Manchester United oo ay kula ciyaartay garoonka Old Traford.
Horudhaca kulanka Manchester United iyo Liverpool
0 Thursday March 17, 2016 - 11:13:27
(Kubadbile)-Manchester United iyo Liverpool waxa ay isla soo mareen waqtiyo waa weyn oo is xifaalina sanadihii tagay, laakiin hada waxa ay markii ugu horeeyey isku arkeen tartan yurub ah.
Ogoow Saacada la dheelayo kulamada Europa League ee caawa
0 Thursday March 17, 2016 - 11:04:01
(Kubadbile)- Waxaa caawa qaarada yurub ka dhici doona kulama ka tirsan lugta labad warega 16-ka koobka Uefa Ueropa League.
Rooney oo aaminsan in Europe League ay ku reebi karaan Liverpool
0 Tuesday March 15, 2016 - 20:44:49
(Kubadbile) Hogaamiyaha kooxda Manchester United Wayne Rooney ayaa aaminsan inay dhanka kale u rogi karaan guushii ay Anfield ku gaartay Liverpool lugtii koowaad oo Europe League toddobaadkii tegay.
Liverpool oo guul taariikhiga ah ka gaartay Man United
0 Friday March 11, 2016 - 10:03:28
(Kubadbile)- Kooxda Liverpool ayaa 2-0 kaga adkaatay kooxda ay sida weyn u xafiltamaan ee man United lugta hore koobka Uefa Ueropa League wareegiisa 16-ka oo ay labada koox ku yeesheeh garoonka Anfiled.
Milner oo shaki la gelinayo inuu cayaari karo kulanka Reds vs Red Devils
0 Wednesday March 09, 2016 - 21:18:45
(Kubadbile) Xiddiga qadka dhexe uga dheela kooxda kubadda cagta Liverpool James Milner ayaa shaki la gelinayaa inuu ka mid ahaan karo safka Reds oo habeen danbe Anfield ku soo dhaweyn doona kooxda Manchester United.
Tottenham oo u dheesha sida kooxaha Jarmalka
0 Wednesday March 09, 2016 - 20:41:38
(Kubadbile) Macallinka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund Thomas Tuchel ayaa aaminsan in kooxda Tottenham ay u dheesho habka kooxaha Jarmalku ay kubadda udheelaan.
Van Gaal oo ka doonaya cayaartoydiisu inay cashir u dhigaan Liverpool
0 Wednesday March 09, 2016 - 12:49:24
(Kubadbile) Louis Van Gaal maareeyaha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa u soo jeediyay cayaartoydiisa inay ku qasban inay habeen danbe kasoo badiyaan Liverpool oo ay wada dheeli doonaan kulan ka tirsan wareega 16ka Uefa Europe League.
Aaladda goal-line technology oo la isticmaali doono geba gebada tartamada Yurub
0 Friday March 04, 2016 - 18:12:53
(Kubadbile) Xiriirka kubadda cagta Yurub ee Uefa ayaa baahiyay in xagaagan aaladda goal-line technology loo isticmaali doono geba gebada tartamada Champions League iyo Europe League.
Kulankii Manchester United iyo Liverpool oo dib loo dhigay
0 Visits: 1007 | Thursday March 03, 2016 - 20:28:14
Kulankii Manchester United iyo Liverpool oo dib loo dhigay saacada la ciyaari doono kadib markii ay racfaan ka qaateen Kooxda United.
Sneijder oo doonaya inuu sii joogo kooxda tartamada Yurub laga mamnuucay, Galatasaray
0 Thursday March 03, 2016 - 18:27:03
(Kubadbile) Kubbad sameeyaha qaranka Holland Wesley Sneijder ayaa ku faraxsan inuu sii joogo kooxda Galatasaray oo laga ganaaxay tartamada Yurub.
Manchester United oo codsatay in dib loo dhigo kulanka ay ku aadan yihiin Liverpool
0 Saturday February 27, 2016 - 21:11:52
(Kubadbile) Horyaalka Europe League waxaa lugtiisa hore wareega 16 dhammaadka ku kulmi doona muruq weynayaasha Eplka Manchester United iyo Liverppool.